Hydroxyethyl cellulose HEC Factory - China Hydroxyethyl cellulose HEC Abakhiqizi, abahlinzeki
Ikhwalithi ephezulu ye-Hydroxyethyl cellulose yomkhakha wokumboza
1. Ukuvela kwe-HEC Hydroxyethyl cellulose akunambitheki, akunaphunga futhi akunabuthi kumhlophe kuyimpuphu ewumbumbulu ephuzi kancane.
2. Yi-ether ye-nonionic cellulose. I-HEC inemisebenzi yokukhulisa, ukwakha, ukufaka emulsifying, ukusabalalisa, ukuzinzisa nokugcina amanzi. Ihlakazeka kalula emanzini abandayo futhi ashisayo ukuhlinzeka ngezixazululo eziningi ze-viscosity, ifomu lefilimu futhi inikeze umphumela wokuvikela i-colloid.
3. I-HEC ivimba i-electrolyte ephezulu yokuhlushwa. Amandla ayo okugcina amanzi aphindwe kabili kune-MC. Inomthethonqubo omuhle wokugeleza.
1. IMODECELL HEC inokusebenza kokumiswa okuhle, kuxubana ukufana nomphumela omuhle wokuqina nokunye ...
2. I-Hydroxyethyl cellulose, inezindawo ezinokwethenjelwa maqondana nokuphakanyiswa kobukhulu, i-emulsification, ukumiswa, ukusabalalisa, ukuhlangana, ukugcina umswakama nokusebenza kwe-anti-microbic.
3. ILongou Co, Ltd okwamanje iyisisekelo sokukhiqiza esikhulu kunazo zonke se-HEC ekhaya, inkampani inganikeza ngochungechunge oluphathwe ngaphandle nolungalashwa. I-HEC ehlukahlukene enama-viscosities amaningi, athola i-polystyrene yesicelo ebanzi, i-foam polystyrene ekwaziyo, i-emulsion nohlobo olusha lwe-acrylic resin emulsion paint, upende onemibala, amakhemikhali asetshenziswa nsuku zonke kanye neminyango enjalo kanye nokumba emikhakheni kawoyela, izinto zokwakha. Ukunikezela ngezakhiwo ezinhle ekukhushulweni kobukhulu, emulsification, ukumiswa, ukusakazeka, ukugcina umswakama nomsebenzi olwa namagciwane.